मिसनरीहरूको लागि उपहार—१९ हजार वटा विमान टिकट
उपहारस्वरूप दिइएको १९ हजार वटा विमान टिकट
जुलाई २०१३ मा यहोवाका साक्षीहरूको परिचालक निकायले मिसनरी र विदेशमा सेवा गरिरहेका अन्य विशेष पूर्ण-समय सेवकहरूलाई पत्रमार्फत एउटा खुसीको खबर पठायो। त्यस पत्रमा विदेशमा सेवा गरिरहेका विशेष-पूर्ण समय सेवकहरूलाई सन्‌ २०१४ मा वा २०१५ को सुरुतिर हुने अधिवेशन वा अन्तरराष्ट्रिय अधिवेशनमा उपस्थित हुनेहरूलाई मदत गर्ने कुरा बताइएको थियो।
यो प्रबन्धको उद्देश्य विदेशमा सेवा गरिरहेकाहरूलाई अधिवेशनमा उपस्थित हुन मदत गर्नु मात्र थिएन। बरु उनीहरूले आफ्नो परिवार वा साथीभाइसित केही समय बिताउन सकून्‌ भन्ने पनि थियो। सङ्‌गठनले आवतजावतको टिकट खर्च बेहोर्ने कुरा पत्रमा बताइएको थियो।
पहिला पनि यस्तै खालको प्रबन्ध गरिएको थियो तर यो वर्षको प्रबन्धचाहिं अलि फरक थियो। परिचालक निकायको शिक्षण समितिको निर्देशनअनुसारै वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स ट्राभल भन्ने नयाँ विभाग स्थापना गरियो। यो विभागले टिकट बुकिङ गर्ने काम गर्नेथियो।
निम्तो-पत्र पाइसकेपछि वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स ट्राभलमा थुप्रैले विमान टिकटको अनुरोध गरे। जनवरी २०१४ सम्ममा त अनुरोधको ओइरो लाग्न थाल्यो। यस प्रबन्धको हेरचाह गर्न खटाइएको समूहले विश्वभरिका विशेष पूर्ण-समय सेवकहरूको यात्रा गर्ने रुट अध्ययन गर्ने र बुकिङ गर्ने काम गऱ्यो।
कुनै-कुनै रुट अप्ठेरो खालको थियो। आइसल्याण्डको रेकभिकबाट यात्रा गर्नेहरू बोलिभियाको कोचाबाम्बासम्म जानुपर्थ्यो। न्यु क्यालेडोनियाको नोमियाबाट आउनेहरूचाहिं मडागास्करको अन्तानानारिभोसम्म जानुपर्थ्यो। कतिचाहिं पापुआ न्यु गिनीको पोर्ट मोरेस्बीबाट अमेरिकाको सियटलसम्म जानुपर्थ्यो। अनि अरूचाहिं बुर्किना फासोको क्वागाडोगुबाट क्यानाडाको विनीपेगसम्म यात्रा गर्नुपर्थ्यो।
वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स ट्राभल विभागको पाँच जनाले लगभग १९ हजार वटा विमान टिकट बुक गरे। मण्डलीहरूले यही उद्देश्यको लागि दिएको अनुदान प्रयोग गरेर तिनीहरूले १७६ देशका ४ हजार ३ सय यात्रुहरूको लागि टिकट किने र उनीहरूकहाँ पठाए।
यस प्रबन्धप्रति धेरैले कृतज्ञता देखाए। एक मिसनरी दम्पतीले यस्तो लेखे: “आज हामी दक्षिण-पूर्वी एसियामा हाम्रो असाइनमेन्टमा फर्कंदै छौं। पाँच वर्षपछि पहिलो पटक हाम्रो जन्मस्थल बेलायत फर्केर परिवारसित भेट गर्न तपाईंहरूले गर्नुभएको मदतको लागि हामी निकै आभारी छौं। यस्तो प्रबन्ध नभएको भए हाम्रो तर्फबाट बेलायत फर्कन सम्भव हुने थिएन। यो प्रबन्धका लागि मदत गर्नुभएका सबैलाई मनैदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु।”
पाराग्वेमा सेवा गरिरहेका एक मिसनरीले यस्तो लेखे: “म र मेरी पत्नी अमेरिकाको न्यु जर्सीमा आयोजित अन्तरराष्ट्रिय अधिवेशनमा उपस्थित हुन पाएकोमा हामी मनैदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौं। सन्‌ २०११ को सुरुतिर हामी मुख्यालय हेर्न अमेरिका जाने योजना गर्दै थियौं। त्यसको लागि हामीले केही पैसा पनि जम्मा गरेका थियौं। तर त्यसै वर्षको जून महिनामा हामीलाई पाराग्वेको साङ्‌केतिक भाषाको मण्डलीहरूमा बोलाइयो। त्यसको लागि हामीले धेरै यात्रा गर्नुपर्ने थियो। निकै सोचविचार गरेपछि अमेरिका जानुको सट्टा नयाँ जिम्मेवारी राम्रोसँग पूरा गर्न सकियोस् भनेर एउटा कार किन्ने निर्णय गऱ्यौं। पछि हामीले अन्तरराष्ट्रिय अधिवेशनमा उपस्थित हुने निम्तो पनि पायौं। हाम्रो सपना साँच्चै साकार भयो! यहोवाले देखाउनुभएको भलाइ र मायाको लागि हामी मनैदेखि आभारी छौं।”
मलावीमा सेवा गरिरहेका दम्पतीले यस्तो लेखे: “तपाईंहरूलाई धेरै-धेरै धन्यवाद भन्न यो छोटो इमेल पठाएका हौं। सबैका लागि टिकट मिलाउन कति धेरै समय र पैसा लाग्यो होला अनि कत्ति मेहनत गर्नुपऱ्यो होला हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं। हामी तपाईंहरूको कडा परिश्रमको मोल गर्छौं। अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यहोवाको सङ्‌गठनले उदारता देखाएकोले अन्तरराष्ट्रिय अधिवेशनमा उपस्थित हुन र परिवार तथा साथीभाइसित समय बिताउन सम्भव भएकोमा पनि हामी असाध्यै कृतज्ञ छौं।”
वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स ट्राभल विभागका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आफ्नो असाइनमेन्टमा असाध्यै रमाए। मिलाभी नाम गरेकी बहिनीले यसो भनिन्‌, “मिसनरीहरूलाई आफ्नो परिवार तथा साथीभाइलाई भेट्‌न आ-आफ्नो घर जान मदत गर्नु हाम्रो लागि विशेष सुअवसर थियो।” डोरिस भन्ने बहिनीले पनि यसो भनिन्‌, “विदेशमा सेवा गरिरहेकाहरूलाई यहोवाको सङ्‌गठनले कत्ति धेरै माया गर्दो रहेछ भनेर अझ राम्ररी बुझ्न सकें।” अनि यस विभागका निरीक्षक रड्‌नीले यसो भने, “यो काममा भाग लिंदा एकदमै आनन्दित महसुस गरें।”
विश्वभरिका यहोवाका साक्षीहरू मेहनती र आत्मत्यागी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका लागि यस्तो उपहार दिन पाएकोमा असाध्यै खुसी छन्‌।
यहोवाका साक्षीहरू किन ठूलठूला जमघटमा उपस्थित हुन्छन्‌?
प्रत्येक वर्ष हामी तीनवटा विशेष जमघटमा उपस्थित हुन्छौं। यस्ता जमघटमा उपस्थित भएर तपाईं कस्तो लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ?
भिडियो क्लिप: यहोवाका साक्षीहरूको वार्षिक अधिवेशन